Home Wararka Rooble oo qayb ka noqday degaalka beelaha Sacad & Ceyr ee keenista...
Rooble oo qayb ka noqday degaalka beelaha Sacad & Ceyr ee keenista Qaadka (Kenya & Itoobiya)
Beesha Sacad ee uu ka dhashay Ra’iisal Wasaare Rooble oo iyagu awood balaaran ku lahaa keenista Qaadka ka yimaada dalka Kenya ayaa in mudo ah waxa ay RW Ku qasbaayeen in uu ka sheeqeeyo sidii beeshiisa dib ugu hanan lahayd awooda keenista qaadka Kenya.
Dhanka kale , Beesha ceyr iyo qaar kamida ganacsasata beesha reer xaaji Saleemaan ee oo xulufo la ah beesha Mariixaan ee uu ka dhashay Madaxweyne Farmaajo ayaa ayagana waxa ay la wareegeen keenista qaadkaa ka yimaada dalka Itoobiya. Beesha Cenyr ayaa dhankooda wacad ku maray in ayan marnaba ogolaan doonin in keenist qaadka Kenya dib loogu celiyo beesha Sacad.
Go’aan uu dhawaan ku dhawaaqay Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa waxa uu salka ku hayaa arimo dhaqaale iyo in uu dib ugu celiyo awooda keenista qaadka Keny beesha uu ka dhasahay. Wararka qaar ayaa sheegaya in RW Rooble kaligiis loo balan qaaday in la siiyo aduun lagu sheegay $3Milyan oo lacagta Doolarka ah., qaybna uu ku yeesho shuraakta keenista qaadka.